I-TerraGenesis ikunika amandla okwenza umhlaba iiplanethi zonke | I-Androidsis
I-TerraGenesis ifika ukuze ungene kwindalo iphela, ikholoni kunye nokuma inkitha yeeplanethi. Ngalesi siqendu unethemba lokukukhazimulisa ukuze ucinge ngokujonga indawo kwaye uyila iiplanethi eziya kuhlala kubakholoniyali bakho.
Kwaye ingcinga ephambili yeTerraGenesis ingaphezulu kokukhuthaza zibeke ezihlangwini zabahlali abafikelela esiphelweni sendalo iphela ukwandisa imbewu yempucuko yakho. Umdlalo opheleleyo weqhinga esingaliphosanga kwi-Androidsis.
1 Iiplanethi zeTerraform kwiTerraGenesis
2 Landela inkqubela phambili yempucuko yakho
3 Yenza izinto eziphilayo kwaye uvelise amazwe angakhethiyo
Iiplanethi zeTerraform kwiTerraGenesis
Esona sizathu siphambili sokuba yi-TerraGenesis kukunika ithuba lokuba ube jonga uninzi lweeplanethi ezinedatha yokwenyani yeNASA. Ngamanye amagama, ukuba ungumlandeli weenkwenkwezi kwaye ulandela lonke uhambo lweerobhothi ezinje ngeCuriosity kwiPlanethi kaMars, iTerraGenesis ngumdlalo ekufuneka uyifakile kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Ke kuyakufuneka uqale i-adventure yeeplanethi ukuze kancinci kancinci iikholoniyali zihlale iikholoni ezahlukeneyo oza kuzifumana. Kuqala kufuneka ujoyine elinye lamacandelo amane eenkwenkwezi azama ukulawula indalo iphela. Nganye kwezi mpucuko zinamandla kunye nobuthathaka, ke ngokuhamba kwexesha uyakufumanisa ukuba yeyiphi ekufaneleyo ngokwendlela odlala ngayo.
Emva kweli nyathelo lokuqala, uya kuqala ukwenza iikholoni zehlabathi kunye neekoloni ozibeka kwimephu nganye. Kuya kufuneka wandise indawo yokuhlala yabakholoni bakho ukuze bakwazi ukusinda kwiindawo ezinobutshaba. Oko kukuthi, uya kuba nesigqibo esisesandleni sakho ukuze umhlaba ube yiplanethi iipropathi ezithile ezinje ngoxinzelelo lomoya ziyatshintshwa, ioksijini, amanqanaba olwandle kunye ne-biomass.
Landela inkqubela phambili yempucuko yakho
Enye into ebalulekileyo yeTerraGenesis kukulandela ukuvela kwempucuko oyimisileyo kwiplanethi. Ngokusebenzisa iphaneli yeenkcukacha-manani Uyakwazi ukufumana imiba ebaluleke kakhulu ukuze uyekise amanyathelo alandelayo aza kuthathwa ngabahlali bakho.
Oko kukuthi, ungaya kwifayile ethile njengoko injalo lungelelanisa uqoqosho, lwenze imigaqo-nkqubo yokusingqongileyo, ithathe isigqibo sokuba ngaba impucuko itsalela kwidemokhrasi ngakumbi kunolawulo lobuntu okanye unike amaxabiso anje ngolwazi okanye ubutyebi. Oku kuyakwenza ukuba impucuko yakho ithathe amanyathelo abalulekileyo kungxamiseko ukuze uphumelele.
Izinto eziphambili ngokubaluleka lelinye lamanqaku ekufuneka lithathelwe ingqalelo kwiscreen esiphambili esibonisa idatha enje Ukuphila, abemi, okanye eyona nto iphambili ngoku, ngaphandle kokulibala amacandelo amahlanu abaluleke kakhulu: uPhando, iiKoloni, iNkcubeko, iiSatellites kunye neBiosphere.
Umzekelo, kuPhando ungaphucula iiseti zezinto zokufudumeza, Phanda ngeziko lokugcina pUkuphucula uxinzelelo okanye ukubeka phambili ngaphezulu kokudalwa kwesityalo seoksijini. Kancinci kancinci siya kufumanisa eyona ilungileyo kwiplanethi ngamanye amaxesha, ngakumbi xa siqala umdlalo kwiplanethi efana neMars.
Yenza izinto eziphilayo kwaye uvelise amazwe angakhethiyo
I-TerraGenesis isivumela iintlobo ezininzi zezenzo ezinje ngokudala eyethu indalo esekwe kwizinto ezenziwe ngabantu, yongeza ii-64 ezizodwa zofuzo ukwenza ezo zinto ziphilayo, ulawule iifom zobomi eziya kuchuma kwindalo ephilayo yasemhlabeni okanye yasemanzini, kunye nokukwazi ukuvelisa imihlaba engahleliyo ngemephu engaphezulu kunye nokuphakama.
Kukho konke oku sinokongeza ukuba sinezandla zethu Iiplanethi zokwenene zenkqubo yethu yelanga, ezinje ngeMars okanye iVenus, okanye iisathelayithi zazo kunye neeplanethi ezinje ngeCeres okanye iPluto. Konke oku kunqunyiwe ngengoma yesandi esinceda ukusikhuthaza ukuba siqhubeke nokuthambisa ezo planethi zisilindeleyo ukuba sizenze terraform ukuze zikhusele ubomi obutsha njengalezo ziphilayo.
Umdlalo mhlawumbi oswele umxholo obonakalayo ositsala ngakumbi, leyo inokuba neJet Space, nangona inani elikhulu lokukhetha njengomdlalo weqhinga lanele ukondla loo mnqweno wokuthambisa iiplanethi nokwandisa imbewu yempucuko yethu. I-TerraGenesis ifika inomdla wokuba yenye yezona zilungileyo Imidlalo yeqhinga lesithuba nangaphezulu ukuba unayo mahala kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. Ewe uya kuba neepakethi ezahlukeneyo zeplanethi ngentlawulo enye, ukwenza iikholoni zehlabathi!
Ukwazi ukwenza amathanga kwihlabathi elitsha
Ubume bayo bendawo
Isilela kumxholo obonakalayo wokugxininisa kwisicwangciso
Umthuthukisi: Indawo yokuhlaziya
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Ikholoni kunye nokuma kweeplanethi kwiTerraGenesis, umdlalo weqhinga ongafanele uphoswe
ISOCELL Plus: Itekhnoloji entsha ye-Samsung yokuphucula iifoto kwiimeko eziphantsi zokukhanya